Wasiirka Xanaanada Xoolaha Soomaaliya oo sheegay in Sucuudiga ogolaaday in loo dhoofiyo Xoolaha - Jowhar Somali Leader
Home Somali Wasiirka Xanaanada Xoolaha Soomaaliya oo sheegay in Sucuudiga ogolaaday in loo dhoofiyo...
Wasiirka Xanaanada Xoolaha Dhirta iyo Daaqa Xukuumadda Soomaaliya Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen oo shir jara’id maanta ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa kaga hadlay xayiraadii Sacuudiga ka qaaday Xoolaha Soomaaliya ee loo iib geyn jiray suuqyada Sucuudi Carabiya.
Wasiirka ayaa tilmaamay in talaabooyinkan ay yimaadeen dadaalo ay hormuud ka eheyd Wasaarada, kaasoo ugu danbeyn dhaliyay in lagu guuleysto in dib loo furo suuqan oo muhiim u ahaa bulshada Soomaaliyeed inbadan oo kamid ah.
“Maanta oo ay taariikhdu tahay 23 bisha Abriil 2020, waxaan shirkaan jaraa’id u qabanayaa in aan bulshada la wadaago furitaanka Xoolaha Soomaaliya ee loo suuq geyn jiray dalka Boqortooyada Sacuudi Carabiya, kadib dadaal ay samaysay Wasaarada Xanaanada Xoolaha Dhirta & Daaqa Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Iyadoo wadashaqayn wanaagsan iyo taageero ka helaysaa Wasaaradda Deegaanka, Beeraha iyo Biyaha Boqortooyada Sacuudi Carabiya” ayuu yiri Wasiirka.
Mr. Xuseen ayaa carabka ku dhuftay in sanad barkiis ay soo socotay qorshahan iyo sidii Sucuudiga loogu qancin lahaa furitaanka Suuqa, isagoo si gaara ugu mahad celiyay Wasaaradda Deegaanka, Beeraha iyo Biyaha ee Sacuudiga.
“Waxaan halkaan ugu mahad celinayaa Boqortooyaada Dalka Sacuudiga oo hormuudka u yahay Khaadimka labada Xaram ee Shariifka ah Malik Salman Bin Cabdul Casiis iyo Wasaaradda Deegaanka, Beeraha iyo Biyaha ee Sacuudiga Madaxdeedii oo runtii siniyadsami leh noola shaqaysay Mudadii lixda bilood ee howshani aan kawada shaqaynaynay ilaa ugu danbayntiina ay miro dhal noqotay. Waana Markii ugu horaysay muddo lix sanadood kadib Xoolaha Soomaaliya loo furo Suuqyada Gudaha ee Boqortooyada Sacuudiga, iyadoo sanadaaahasi waqtiga Xajka ah o keliyah naloo furi jiray, waana guul usoo hoyatay Shacabka Soomaaliyeed” ayuu hadalkiisa ku sii daray Wasiirka.
Wasiirka Xanaanada Xoolaha ayaa hadalkiisa sii raaciyay “Sidaan la wada socono Xoolaha waa laf dhabarta dhaqaalaha dalka, islamarkaana ay ku tiirsan yihiin qoysas badan oo Soomaaliyeed, haddaba Xukuumadda Federaalka Soomaaliya waxaa ay dadaalo farabadan ugashay sidii suuqaqii horey ujiray loo soo celin lahaa suuqaaq cusub oo xoolaha loo iibgeeyo loo abuuri lahaa si loo daboolo baahida asaasiga ah ee xoolo-dhaqatadeena loona xoojiyo awoodda ganacsatada Soomaaliyeed”.
Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen Wasiirka Xanaanada Xoolaha Dhirta iyo Daaqa Xukuumadda Soomaaliya ayaa ugu danbeyn sheegay in xiligan dunida uu ragaadiyay cudurka Covid19 oo saameyn muuqata ku yeeshay dhaqaalaha dunida, balse guushan ku aadan dhoofka xoolaha ay kaalin muuqata ka qaadaneyso sare u kaca dhaqaalaha Shacabka Soomaaliyeed.
“Ayadoo maanta uu ka jiro dunida hoos udhac dhaqaale oo ballaaran, culeys caalami ah oo ka yimid cudurka safmareenka ah ee COVID 19 awgeed, haddana waa Ilaah mabaddii in aan xoolo dhoofino taasoo dhaqaalaha Shacabka Soomaaliyeed kor usoo qaadaysa,Waa arrin lagu farxo waxayna qayb weyn ka qaadanaysaa kor u qaadist dhoofka Waxsoosaarka gudaha GDP” ayuu hadalkiisa ku soo xiray Wasiir Xuseen.